Hyacinth | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Otu esi eme ka hyacinth na-eto eto na dacha
Hyacinth nwere ike ịbụ ụlọ osisi, na ubi. Hyacinths na-amalite ịmalite n'oge opupu ihe ubi. Osisi ndị ahụ na-egbuke egbuke ma na-egbuke egbuke. Ọ bụrụ na anyị na-ekwurịta banyere hyacinth nke oge a, ha nwere ike imeri ihe iche n'echiche dị iche iche - na-acha ọcha ka oji-ojii, pink na odo odo. Hyacinth bụ okooko osisi nke nwere ike ịba mma maka ịkwado ya na maka kwachaa.
Otu esi akụ na ilekọta eyịm Viper
Muscari (Eubotrys, Botryanthus) bụ osisi bulrenus perennial, nke a makwaara dị ka "viper yabasị" na "hyacinth". N'okpuru ọnọdụ okike, ọ na-eto n'ugwu na oke ọhịa nke Crimea na Caucasus, n'ógbè Mediterenian, n'ebe ndịda na n'etiti Europe, na Asia Minor. Osisi ahụ aghọwo ihe a na-ewu ewu karịsịa n'ihi oge mbụ nke muscari, ma e jiri ya tụnyere isi okooko osisi ndị ọzọ.
Mmiri primroses kasị mma maka inye na atụmatụ nke ịkụ mkpụrụ ha
Mgbe frosts na oyi na-atụ, ọ dịghị ihe ga-ebuli mmụọ gị dị ka mmiri primroses nke mbụ na-agafe na snow ma gosipụta njedebe nke mmiri. Osisi okooko osisi na-eguzogide oyi na-atụ oyi, na-adịghị mma ma na-amụba ngwa ngwa. N'ihi àgwà ndị a nile, ha bụ ndị magburu onwe ha maka ịme ụlọ ezumike, ogige, ogige, wdg.